वामदेवको घोषणा : ‘अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको लागि पहल गर्छु’, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
वामदेवको घोषणा : ‘अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको लागि पहल गर्छु’
बिहीबार साँझ रिपोर्टर्स क्लब नेपालले नेता गौतमको निवासमा आयोजना गरेको देउसी–भैलो कार्यक्रममा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनले भने,‘तत्कालिन् एमाले र तत्कालिन् माओवादी केन्द्रले साझा घोषणापत्र जारी गरेर हामी निर्वाचनमा गयौं । घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरु लागु नभएसम्म हामी सुखी र समृद्ध हुनै सक्दैनौं । घोषणापत्र दोहोर्याएर हेर्न आग्रह गर्दछु । पत्रकारहरुलाई यो साझा घोषणापत्र लागु गर्न पनि दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउन यहीँबाट विशेष अनुरोध गर्दछु।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको नेतृत्वमा पुगेको टोलीसँग खुलेर कुरा गरेका नेता गौतमले सरकार गठन भएको जम्मा ८ महिनामात्रै भएको बताउँदै यसका कामहरु हर्न बाँकी रहेको सुनाए । उनले भने,‘अझै चार वर्ष चार महिना बाँकी छ । समृद्धि हाँसिल गर्न सक्यो कि सकेन ? भनेर अहिले भन्ने बेला होईन् ।’
बरिष्ठ नेता माधव नेपाल र तपाईको प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्टि छ भन्ने कुरा आएको छ नि भनेर पत्रकार धमलाले सोधेको प्रश्नमा उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले राम्रो गर्नुभएन भनेर भनेको छैन । वर्तमान सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गरेन भनेर गुनासो छ। त्यही कुरा भनेको हो । अरु त्यस्तो केही पनि होईन।’ उनले पटक पटक निर्वाचनमा जारी गरेको साझा घोषणापत्र पार्टीका हरेक केन्द्रिय सदस्यहरु, स्थायी समिति सदस्यहरु र सचिवालय सदस्यहरुले पढ्नुपर्ने पनि दोहोर्याए ।
उनले आफूलाई पूनः संसदमा ल्याउनको लागि पार्टीको सचिवालय बैठकले चुनाव लडाउने भनेर सर्वसम्मतीले निर्णय गरेको पनि दाबी गरे । उनले भने,‘अरु कुरा त उहाँहरुलाई सोध्दा थाहा हुन्छ । कतिसम्म गर्नुभएको हो भने निश्चित जित्ने निर्वाचन क्षेत्रमा तपाई जानुपर्छ भन्नुभएको हो । अनि निर्वाचित सदस्यले जिताउँछौं र जनताले पनि जिताउँछौं भन्नुभयो भने तपाई जानुपर्छ भनेर निर्णय भएको हो । यो फेरी सर्वसम्मत निर्णय भएको हो । सचिवालयमा सर्वसम्मती भएको हो।
यसबारेमा कुनै विमति थिए । पछि विमति किन भयो मैले बुझ्न सकेको छैन् ।’ फरक प्रसँगमा उनले आफूलाई जिम्मा दिने हो भने पार्टी एकताको बाँकी सबै काम सम्पन्न गरेर देखाईदिने पनि उद्धघोष गरे । उनले भने,‘तीन महिनाभित्र एकीकरण गरेर सम्पन्न गरिदिन्छु । त्योपनि विवादरहित तरिकाले । मसँग कुशलता छ । यससम्बन्धी क्षमता छ । कहिलेकाहीँ एक्लो व्यक्तिको भूमिका पनि ठूलो र प्रभावकारी हुन्छ । मैले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यस सम्बन्धमा विशेषज्ञता हाँसिल गरेको छु । मैले निर्माण गरेका संगठनहरु फलेको छ । फुलेको छ ।’
अब सरकारले घोषणापत्रअनुसार काम गरेन भने आफू केही साथीहरुको साथ र सहयोग लिएर कार्यान्वयन गराउनतर्फ लागिपर्ने पनि गौतमले जनाए । फरक प्रसँगमा उनले आफूलाई पार्टीका नेताहरुले अन्र्तघात गरेर चुनाव हराएको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘त्यो क्षेत्रमा म निर्वाचन हार्ने अंकगणित थिएन । स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसको २४ हजार मत थियो । नेकपा माओवादीको २६ हजार र एमालेको ३० हजार । यत्तिको फराकिलो मत हुँदाहुँदैपनि चुनाव हार्न पुगें । यसमा ममाथि अन्र्तघात भएको कुरा प्रष्ट रुपमै देखियो । त्यहाँ चलखेल भएको छ । हाम्रो मत बिग्रियो।’